အီရန်နိုင်ငံရှိ ဆက်သွယ်ရေး - ဝီကီပီးဒီးယား
အီရန် ၂၀% ကျော်ကြီးထွားမှုနှုန်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရှိခဲ့ဘူးသောပထမငါးနိုင်ငံများကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ အီရန်ကျေးလက်ဒေသမှတယ်လီကောမ်ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်ယူနက်စကိုအထူးလက်မှတ်ချီးမြှင့်ထားပြီး.
အီရန်ဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း အားလုံးနီးပါးသည် အစိုးရပိုင်များဖြစ်ပြီး အီရန်တယ်လီကွန်မြူနီကေး ကုပ္ပဏီ(TCI)မှကြီးစိုးထားလေသည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် တယ်လီဖုန်းလိုင်းပုံသေလိုင်း ဒေသစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ညီလျှော်စွာ အလွန်အမင်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ လူဦးရေ၁၀၀ တွင် ၂၂ ဦး တယ်လီဖုန်းလိုင်းပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကာလတွင် အီဂျီစ်၌ လူ၁၀၀ဦးတွင် ဖုန်းပိုင်သူ၁၄ ဦးနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျတွင် လူ ၁၀၀ တွင် ဖုန်းပိုင်သူ ၁၅ ဦးသာရှိခဲ့သည်။သို့သော် ယူအေအီးနိုင်ငံများအတွင်း လူဦးရေ၁၀၀တွင် ၂၇ ဦးဖြစ်ပြီး အီရန်သည် ယူအေအီးနိုင်ငံများအနောက်တွင်ရှိခဲ့သည်။အီရန်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထိ လူတိုင်း မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးစီရှိထားခဲ့ကြသည်။ .
အီရန်လူဦးရေသည် သန်း၈၀ နီးပါးရှိနေပြီး အီရန်ပြည်သူများအကြား ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် အသက်၂၅ နှစ်အရွယ် လူတန်းစားများဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အီရန်သည် ကျေးလက်ဒေသများအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုပြုလုပ်ပေးသော ဌာနခွဲပေါင်း ၅၂၀၀၀ ကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည် ။ ကြိုးဖုန်း တယ်လီဖုန်းလိုင်း ၂၄ သန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းထိုးဖေါက်နိုင်မှုနှုန်းသည် ၃၃.၆၆ ရာခိုင်နှုန်းထိဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အီရန်တွင် ၄၃ သန်း အင်တာနက်အသုံးပြုသူရှိခဲ့ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများအတွင်း အီရန်သည် အင်တာနက်သုံးမှုအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သည်။
အီရန် သည်၂၀ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကြီးထွားမှုနှုန်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရှိခဲ့ဘူးသောပထမငါးနိုင်ငံများအကြား တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အီရန်ကျေး လက်ဒေသ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ အတွက်ယူနက်စကိုအထူးလက်မှတ်ချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းခံရသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အီရန်နိုင်ငံ၏တယ်လီကောမ် ဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက် သည်စတုတ္ထအကြီးဆုံးဈေးကွက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉.၂ ဘီလီယံခန့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်များတွင် မက်ထရစ်ယူနစ် ၆.၉ ဖြင့် $ ၁၂.၉ ဘီလီယံအထိကြီးထွားရန်မျှော်လင့်နေသည်။
အီလက်ထရောနစ်ဂျာနယ် (EJISDC)ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များပေါ်တွင်ပြောဆိုချက်အရ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ (ICT) ကဏ္ဍသည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ၁.၁ မှ ၁.၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုခဲ့သည် ဟု သိရသည်။၎င်းအပြင် လူဦးရေ၁၅၀၀၀၀ခန့်သည် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိကြောင်းနှင့် လူဦးရေ ၂၀၀၀၀ ဝန်းကျင်သည် ဆော့ဝဲ စက်မှုလုပ်ငန်း၌ လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၂၀၀ သည် သတင်းအချက်အလက် အပိုင်းဂဏ္ဍတွင် ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်၍ ၎င်းတို့အနက် ကုပ္ပဏီပေါင်း ၂၀၀ ကို ဆော့ဝဲ စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ခွင့်ပြုပေးလိုက်သည် ဟု သိရသည်။၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဆော့ဝဲ လုပ်ငန်းမှ ထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချမှုသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ခန့်အထိရှိခဲ့သည်။.
၄.၁.၂.၂ 3G network (၃ ဂျီ ကွန်ယက်)
၈ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဖွံ့ဖြိုးရေး
၉ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စတင်ခြင်း
၁၁.၁.၁ ၂၀၀၉ – IPO(ပထမအဆင့် အများရှေ့ အော်ဖါယူခြင်း
၁၁.၁.၂ အခြားသော ICP/ISP IPOs
အစိုးရပိုင်ဆိုင်ထားသော ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများမှာ ပြည်သူ့ ရေဒီယိုလိုင်း ၃ လိုင်းနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း ၂ လိုင်း ဖြစ်ပေသည်။ ကျန်ရေဒီယိုလိုင်းများနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတို့သည် ဒေသအလိုက် ထုတ်လွှင့်သော လိုင်းများဖြစ်ပေသည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၁၀၀၀ အကြား ရေဒီယိုလိုင်းပေါင်း ၂၅၂ လိုင်းနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းပေါင်း ၁၅၈ ခု တယ်လီဖုန်းလိုင်း ၂၁၉ ခု နှင့် ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပြူတာ ၁၁၀ လုံး ရှိခဲ့သည်။၁၉၉၀ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် အိမ်သုံးကွန်ပြူတာသည် အလွန်မှပင် ဈေးနှုန်းများသက်သာခဲ့သည့်အတွက် ထိုအချိန်မှ စ၍ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ ပိုမိုမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ကြေးနန်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအား(ပြန်ကြားရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဝန်ကြီးဌာန)ဟု အမည်ပြောင်း၍ အင်တာနက် အကောင့်များကို အများပြည်သူတို့အကြားစတင်ရောင်းချခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် အီရန်၏ဆက်သွယ်ရေးမှ ရရှိသော ဘဏ္ဏာငွေသည် ၁.၂ ဘီလီယံ ဒေါ်လာ ထိရှိခဲ့သည်။၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အီရန် ဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက်သည် မိမိ၏ဒေသအတွင်း စတုထ္ထအကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး ၉.၂ ဘီလီယံဒေါ်လာအထိမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်များတွင် မက်ထရစ်ယူနစ် ၆.၉ ဖြင့် $ ၁၂.၉ ဘီလီယံအထိကြီးထွားရန်မျှော်လင့်နေသည်။
ငါးနှစ်အတွင်း၌ ရေးဆွဲထားသောစီမံကိန်းများအကြား စတုထ္ထမြောက်စီမံကိန်းသည် စီးပွားရေးအရှိန်အဟုန်တိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် အဓိကရေးပါသော စံချိန်စံညွှန်းများကို အကြံပြုတင်ပြထားသည်။ ၎င်းတို့မှာ ကြိုးဖုန်းလိုင်းပုံသေလိုင်း၃၆ သန်း နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် ထိုးဖေါက်မှုနှုန်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ၊ယုံကြည်စိတ်ချရသောကျေးလက်နေအိုင်စီတီဆက်သွယ်မှုနဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းတို့ဖြစ်သည်။ ယခင်တိုးတက်လာမှုများအရ စက်မှုလုပ်ငန်းသည် ရည်ရွယ်ချက်များကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ အီရန်သည် အလွန်မှပင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လာခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၌ အလွန်မြင့်မားလာခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ဒေတာအသုံးပြုမှုများအနက် အနည်းငယ်အသုံးပြုမှုများကို ပါ ထည်သွင်းတွက်ချက်ရပေမည်။အချို့သော ဆက်သွယ်ရေးသတ်မှတ်ချက်စနစ်များ ၂၀၁၂ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပေသည်။
သုံးစွဲသူများအတွက် ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းဝန်ဆောင်မှု ၂၀၁၂ နှင့်၂၀၁၄ ခုနှစ် (သန်းပေါင်းများစွာသော):
ကြိုးမဲ့အင်တာနက် ချိတ်ဆက်စနစ် ၃.၁ ၄.၅
ကြိုးဖုန်း ၂၈.၈ 29.3
မိုဘိုင်းဖုန်း ၅၈.၂ ၆၁.၂
အီရန်နိုင်ငံသား ၂၃ သန်းကျော်သည် အင်တာနက်အသုံးပြုသူများဖြစ်ကြပြီး အီရန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့အကြား ၄၅ သန်းကျော်သည် မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူများဖြစ်ကြသည်(၂၀၀၉/၁၀)။ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူနိုင်ငံသားများ သည် သူငယ်ချင်းတို့အကြား အချင်းချင်း မက်စချ် ပို့ခြင်းနှင့် ဘရောင်ဆာများကို ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးဖြင့် အသုံးပြုကြလေသည်(သို့သော် အစိုးရသည် အင်တာနက်မြန်ဆန်မှုနှုန်းနှင့် ထိုအသုံးပြုမှုများအပေါ် ထိန်းချုပ်မှုများရှိနေသည်) ။ ထို့ပြင် Blogging(ဘလော့ဂ်)ရေးသားခြင်းသည်လည်း ၎င်းတို့အကြားအလွန်မှပင် ရေပန်းစားသည်။
အီရန်: တယ်လီကွန်းနှင့်နည်းပညာခန့်မှန်းချက် (ဈေးကွက်ကိုယ်ရေးဖိုင်)
အဓိကတယ်လီဖုန်းလိုင်းများ ('000) ၁၂၈၈၈ ၁၅၃၄၁ ၁၆၃၄၂ ၁၈၉၈၅ ၁၉၉၃၄ ၂၀၃၀၀
အဓိကတယ်လီဖုန်းလိုင်းများ (လူဦးရေ၁၀၀ အတွင်း ) ၁၉.၁ ၂၂.၆ ၂၃.၈ ၂၇.၃ ၂၈.၄ ၂၈.၆
မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူ ('000) ၂၄၁၀ ၃၄၄၉ ၄၂၇၁ ၇၂၂၂ ၇၅၈၃ ၁၇၇၉၉
မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူ(လူဦးရေ၁၀၀ အတွင်း) ၃.၆ ၅.၁ ၆.၂ ၁၀.၄ ၁၀.၈ ၂၅.၁
အင်တာနက်အသုံးပြုသူ('000) ၃၁၆၈ ၄၈၀၀ ၅၅၀၀ ၇၀၀၀ ၇၃၅၀ ၇၇၁၈
အင်တာနက်အသုံးပြုသူ (လူဦးရေ၁၀၀ အတွင်း) ၄.၇ ၇.၁ ၈.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၅ ၁၀.၉
ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပြူတာများ (၁၀၀၀ လူဦးရေအတွက် ရောင်းရန်ရှိသော ကုန်) ၇၅ ၉၁ ၁၀၅ ၁၀၅ ၁၁၀ ၁၁၆
တယ်လီဖုန်း, မြို့တွင်းခေါ်ဆိုမှု ၃ မိနစ်နှုန်း (av) ၀.၀၁
ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပြူတာ ၅၁၂ MB RAM (av) ၁၃၂၆
တယ်လီကွန်းအဆိုပြုထားသောဘတ်ဂျက် (FY ၂၀၁၇)
ပြန်ကြားရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဝန်ကြီးဌာန (နှင့်ဆက်စပ်အေဂျင်စီများ) ၈၀.၁ သန်း
အမျိုးသားဆိုက်ဘာစပေ့စ် ဌာနချုပ် ၁.၂ သန်း
အီရန် Space အေဂျင်စီ ၄.၆သန်း
NIN နှင့်ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အဦများ ၁၉၀ သန်း
ရေဒီယို ထပ်ဆင့်ထုတ်ပေးခြင်း/ အပြိုင်အဆိုင်ဈေးများကွက်ဖန်တီးခြင်း ၁၂၀ သန်း
NINအတွက် အီလက်ထရောနစ် အစိုးရ/အီလက်ထရောနစ်အကြောင်းအရာ ၈၀ သန်း
အခြေခံအဆောက်အဦများ/ ဆိုက်ဘာစပေ့စ်အဓိက စီမံကိန်း ၂၆.၅ သန်း
ကွန်ပြူတာဂိမ်းဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ၀.၉ သန်း
အီရန်တွင် စာနယ်ဇင်းများစွာအနက် ပုဂ္ဂလိကနှင့် အစိုးရဟူ၍ ရှိသည်။ ထိုစာနယ်ဇင်းများသည် နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေးအမြင်နှင့်အခန်းဂဏ္ဍများကို ထုပ်ဖေါ်ပေးနေလေသည်။ ၎င်းစာနယ်ဇင်းများအတွက် စောင့်ကြည့်ရန်ခုံရုံးတစ်ခု သတ်မှတ်ထားရှိသည်။ယင်းခုံရုံးသည် ဘာသာတရားနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အရေးအသားများကိုလည်းကောင်း လူတို့ပျက်စီးဖွယ်ရာအရေးအသားများကို လည်းကောင်း လူတို့အတွက် အကျိုးဖြစ်စေမှုကို တားဆီးသည့်အရေးအသားများကို လည်းကောင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။၁၉၉၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကာလများမှ စ၍ ထိုခုံရုံးသည် လူတို့အကျိုးကို မျှော်ကိုးသောအားဖြင့် မြောက်များစွာသော စာနယ်ဇင်းများကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။အီရန်တွင် များစွာသော သတင်းစာတို့သည် ဖါရ်စီ ဘာသာစကားဖြင့် ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအပြင် အခြားသော ဘာသာစကားများဖြင့် လည်းထုတ်ဝေသော သတင်းစာများရှိသည်။ များစွာသော စာနယ်ဇင်းတို့သည် တီဟီရန်ကို အခြေပြု၍ ကျယ်ပြန့်စွာ ဖြန့်ဝေလျှက်ရှိသည်။ သတင်းစာများအကြား နေ့စဉ်သတင်းစာနှင့် အပတ်စဉ်သတင်းစာဟူ၍ရှိပြီး ယင်းသတင်းစာအမည်များမှာ အီသ်သေလာအ်၊ ကိုင်ဟာန်း၊ ရေဆာလသ်၊ အီရန်သတင်းစာတို့ဖြစ်သည်။ (အီရန်သတင်းစာနှင့် တီဟီရန်သတင်းစာနှစ်မျိုးသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားဖြန့်ဝေသော သတင်းစာများဖြစ်ကြသည်)
၁၉၇၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှ ယနေ့ချိန်ထိ များစွာသောအကြံပြုချက်အရ ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုအတွက် ဇိုဟ်ရဲဟ် အမည်ရှိ ဂြိုဟ်တု တစ်လုံးကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ပစ်လွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုဂြိုဟ်တုသည် စီးပွားရေးဂြိုဟ်တုနှင့်အလားတူ စီမံထားလေသည်။သို့သော် ဤသို့စီမံထားမှုသည် အီရန်တယ်လီကောမ်ဆက်သွယ်ရေးဌာန နှင့်ပတ်သက်သော ငှားရမ်းသည့်စာချုပ်များဖြင့်ဖြစ်ပေသည်။ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုပိုင်း ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် အီရန်နှင့်ရုရှားနှစ်နိုင်ငံ အကြားစီမံကိန်းရေးဆွဲ၍ သဘောတူညီချက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့သည်။သို့သော် ဂြိုဟ်တုဆောက်လုပ်ပြီး ပစ်လွှတ်ဖို့ရန်အတွက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလ အထိရွှေ့ဆိုင်းခဲ့လေသည်။ အဆိုပါဂြိုဟ်တု၏အမှန်တကယ်ဆောက်လုပ်ရေးအတိုင်းလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ထို့အပြင် ပြီးခဲ့သော ကာလများ၌ အခြားသော ဂြိုဟ်တုဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
တယ်လီဖုန်းစနစ်များသည်လုံလောက်မှုမရှိပါ။သို့သော် ခေတ်မှီတိုးတက်လျှက်ရှိသည်။ ထိုသို့ခေတ်မှီတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်မှာ လုံလောက်စွာအသုံပြုနိုင်ရေးနှင့် ကျယ်ပြန့်စွာဝန်ဆောင်နိုင်ရေးသာမက ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကျေးလက်ဒေသများတွင်လည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်သည်။သို့သော် လက်ရှိအနေအထားတွင် ထိုကျေးလက်ဒေသများသို့ ဆက်သွယ်၍မရနိုင်သေးပါ။
၁၉၉၄ခုနှစ်တွင် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်အတွက် ကြီးမားသောရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့သည် လက်ရှိကာလ၌ မိုဘိုင်းဖုန်းများ အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင်လည်း ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဒီဂျီတယ် စက်များကို အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်သည်။
အီရန် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးလိုင်းသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် အလွန်မှပင် ဖွံဖြိုးတိုး တက်မှုရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရသည့်အကြောင်းအရင်းများတွင်းမှ ထင်ရှားသောတစ်ခုသည် အဓိက လိုင်းအရေအတွက် တိုးလာသည့်အတွက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။၁၉၇၈ နှစ်တွင် အီရန်တွင်ကြိုးဖုန်းလိုင်း ၈၅၀ ၀၀၀ ခန့် သွယ်တန်းခဲ့သည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်အထိ လိုင်းပေါင်း၁၇၆၇၀၀၀ လိုင်း တိုးလာခဲ့သည်။ထပ်မံ၍ ၁၉၈ ၉ ခုနှစ် တွင် ကြိုးဖုန်းလိုင်းအရေအတွက်သည် ၂၃၈၀၀၀၀ လိုင်းအထိ ရောက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ မှ ၁၉၉၄ ခုနှစ် ၅ နှစ်၉.၁တာကာလအတွင်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြှင့်တင်လိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွင်းမှ တစ်ခုသည် ကြိုးဖုန်းအလုံးအရေအတွက် တစ်သန်းကျော် ထပ်မံတိုးလိုသည့်အတွက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ အနိမ့်ပိုင်းမှ အမြင့်သို့တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားမှု ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တိုးတက်မှုနှုန်းကို သိသိသာသာကွဲပြားစွာမြင်နိုင်ပေသည်မှာ အမှန်တကယ်တိုးတက်လာကြောင်းသိနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ်တော့ ပထမငါးနှစ်အတွင်း ၃.၁ သန်း ကြိုးဖုန်းလိုင်းသစ်များ တပ်ဆင်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက်ဖြစ်သည်။ထပ်မံ၍ (၁၉၉၄-၁၉၉၉)ခုနှစ် အတွင်း ထိုငါးနှစ်စီမံကိန်း ပြီးဆုံးချိန်အထိ ကြိုးဖုန်းသစ်လိုင်းပေါင်း ၄ သန်းအထိ တိုးလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားလေသည်။ထိုခုနှစ်များအတွင်း စုစုပေါင်း တပ်ဆင်ပြီးကြိုးဖုန်းလိုင်း ၉၅၁၀၀၀၀ ထိရောက်ရှိသွားပေမည်။အီရန်နိုင်ငံ ဈေးကွက်ဆယ်သွယ်ရေးစနစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉.၁ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့သည်။( ထိုရရှိမှုသည် ဖုန်းစကားပြောဆိုမှ ၂/၃ နှင့် ဒေတာအသုံးပြုမှုမှ ၁/၁၀ ဖြစ်သည်။)၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း အီရန်တွင် မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူ ၆၆ သန်းရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံလူဦးရေ၏၇၀ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ကျန် လူဦးရေ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကြိုးဖုန်းအသုံးပြုသူများဖြစ်ကြသည်။
၂၄.၈သန်း (၂၀၀၈) ထိုးဖေါက်မှုနှုန်းဖြင့် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း .
မိုဘိုင်းဖုန်း ၈၀.၈၅ သန်း (၂၀၁၂ ခုနှစ်အဆုံး) ၊ ၆၈ သန်း(စက်တင်ဘာ၂၀၁၁) ၃၅ သန်း (၂၀၀၈ ခုနှစ်အစောပိုင်း) ၄.၃ သန်း ၂၀၀၄ ခုနှစ်။ အီရန်တွင် မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူအမြောက်အများသည် ကြိုတင်ငွေဖြည့်စနစ်ဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၇၅ရာခိုင်နှုန်းသော မိုဘိုင်းဖုန်းများကို ဈေးကွက်အတွင်း မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
ထိုးဖေါက်မှုနှုန်း: စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ၉၁.၂ % ; ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်၁၃၀% .
စမတ်ဖုန်း ကိုင်ဆောင်သူများ: ၁၂ သန်း (၂၀၁၄ est.), ၃၀သန်း (၂၀၁၅) ၄၇သန်း (၂၀၁၆), အသုံးများသောဖုန်းအမျိုးအစားများမှာ Samsung နှင့် Huawei တို့ဖြစ်သည်။.
မက်စစ် အတိုများပို့မှု :အီရန်နိုင်ငံသား တို့သည် နေ့စဉ် သန်း၈၀ SMSမက်စစ် ပေးပို့လေ့ရှိကြသည် (နိုဝင်ဘာ၂၀၀၈).
၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်းအကြီးမားဆုံးသော အော်ပရေတာများ - အီရန် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး MCI (ဟမ်ရာဟေအဝလ်) ဈေးကွက်အတွင်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ၊ အီရန်ဆဲလ် MTN (၂၈ရာခိုင်နှုန်း)၊ Emirates Telecommunications Corp (Etisalat) ယင်းကုပ္ပဏီသည်၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန်အတွက် ယူရို သန်း ၃၀၀ ပေးဆောင်ခဲ့သည်။(Etisalat)သည် RighTelလက်အောက်ရှိ Iranian consortium and operates ကိုအမည်ပြောင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အီရန်နိုင်ငံအမျိုးသား အော်ပရေတာကြီးနှစ်ခုဖြစ်သော အီရန်ဆဲလ်နှင့် ဆယားရ်အီရန်တို့သည် GPRSနှင့် ဒေတာ ဝန်ဆောင်မှုပြုထားပေးသည်။ မကြာသေးမီကအသစ်တခု LTE ကိုမိုဘိုင်းဘရော့ဒ်ဘန်း service provider က ApTel ကိုအီရန်တွင် စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် မှစ၍ အီရန်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လာသော မိုဘိုင်းဖုန်းများမှာ တရုပ်နိုင်ငံမှ Huaweiနှင့် Telefon AB L.M၎င်းအပြင် Nokia Siemens Networks (နိုကီယာနှင့် Siemens AG)တို့ပူးပေါင်း၍ ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Orange S.A နှင့် U.K.'s Vodafone (စနစ် HiWEB.ir) တို့သည် အီရန်အတွင်း နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးချဲ့လျှက်ရှိကြသည်။.
3G network (၃ ဂျီ ကွန်ယက်)[ပြင်ဆင်ရန်]
အဘူဒါဘီ အခြေစိုက် Etisalat နှင့် Tamin Telecom တို့သည် အီရန်နိုင်ငံ၏လူမှု့ဖူလုံရေးနှင့်ပင်စင်လစာဌာနအတွက် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလက်မောင်းတစ်စုံဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ၂ နှစ်တာကာလအတွက် ဒုတိယမျိုးဆက်နှင့် တတိယမျိုးဆက်တို့အကြား (၂၀၀၈)ခုနှစ်အတွင်း (3G) ကွန်ယက်ကို ဝန်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ရန် အခွင့်ထူးတစ်ရပ်ကို ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ Etisalat သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ သန်းဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ ငါးနှစ်အတွင်း ဈေးကွက်၏ ၂၀ မှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ချေရှိသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Etisalat သည် ၂ နှစ်တာကာလအတွင်း3G အော်ပရေတာကို ပိုင်ခွင့်မရှိနိုင်တော့ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။ထို့နောက် Tamin Telecom မှ IDRO(စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အီရန်ပြန်လည်မွမ်းမံရေးအဖွဲ့) နှင့် အေမာမ်ခိုမေနီ အမိန့်ထုတ်ပြန်ရေးဌာနချုပ် တို့အကြား ကတိကဝတ်စာချုပ်များတွင် အငြင်းပွားခဲ့မှုတို့ကြောင့် Etisalat ကို အစားထိုးခဲ့သည်ဟု Tamin Telecom မှ ကြေငြာခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Tamin Telecom သည် လူဦးရေ သန်း၆၀ အတွက် 2G ကွန်ယက်၊ လူဦးရေ သန်း၄၀ အတွက် 3Gကွန်ယက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းများအား တင်ပြခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ ပြည်ပ ဆက်သွယ်မှုဝန်ဆောင်ခြင်းကိုIran Infrastructure Company မှသာ တာဝန်ယူ ဝန်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ထိုကုပ္ပဏီသည် လက်ခွဲကုပ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး TCI ပိုင်ဆိုင်သောကုပ္ပဏီဖြစ်ပေသည်။ အဆိုပါကမ္ဘာလုံးခန့် fiber-optic Link ကို (Flag) မှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူယူအေအီးမှရေအောက် fiber-optic cable ကို ဖြတ်ကျော်၍ အာရှဥရောပ (Tae) fiber-optic လိုင်း အဇာဘိုင်ဂျန်တို့ကို တိုးချဲ့၍ ဖြတ်ကာအီရန်၏မြောက်ပိုင်း တာ့ခ်မင်နစ္စတန်ကိုဖြတ်ကာ နှင့်ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံနှင့်အဇာဘိုင်ဂျန်မှတဆင့် ဆက်သွယ်ထားသည်။ HF ရေဒီယိုနှင့်မိုက်ခရိုဝေ့ရေဒီယိုကို တူရကီ, အဇာဘိုင်ဂျန်, ပါကစ္စတန်, အာဖဂန်နစ္စတန်, တာ့ခ်မင်နစ္စတန်, ဆီးရီးယား, ကူဝိတ်, တာဂျီကိစ်တာန် နှင့်ဥဇဘက်မှ ဂြိုဟ်တုမြေပြင်စခန်း - ၁၃ (၉ Intelsat နဲ့ ၄ Inmarsat) (2007) များသွယ်တန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အီရန်-ကူဝိတ်ရေအောက်ဆက်သွယ်ရေးကေဘယ်လ်ကွန်ယက်များလည်းရှိပါသေးသည်။ အီရန်သည်ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ရှိ အတွင်း optical fiber အလင်းဖန်မျှင် ကိုရုပ်သံလိုင်းနှင့်ရေအောက်ဆက်သွယ်ရေးကေဘယ်လ်များစတင်ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည်။အီရန်၏ နောက်အစီအစဉ်မှာ မြောက်ပိုင်းနှင့်အနောက်မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်ဒေသများကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ optical fiber အလင်းဖန်မျှင်များကိုချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။.
ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများ: AM ၇၂, FM ၅, လှိုင်းတို ၅ (၁၉၉၈)
ရေဒီယို နံပါတ်များ: ၂၂သန်း (၂၀၀၅)
ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်ဌာန: ၂၉(ထပ်မံထ) (1997)
တီဗီအရေအတွက် : ၁၅ သန်း (၂၀၀၇ est ။ )
ရုပ်မြင်သံကြားအသံဖမ်း၏အသုံးပြုမှုသည်တရားမဝင်သော်လည်း မြို့ပြဒေသများတွင်ဂြိုဟ်တုဖမ်းယူကြည့်မှုသည်ကျယ်ပြန့်သည်။ အီရန်နိုင်ငံသား ၃၀ ရာခိုငျနှုန်းကျော်သည်ဂြိုဟ်တု channel များကိုကြည့်ကြသည်။
၂၀၁၅ ကတည်းကအီရန်ပြည်တွင်းဖြစ် DVB-T 6,000W ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်မှထုတ်လွှင့်လျှက်ရှိခဲ့သည် ။
အီရန်သည်၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၌ အင်တာနက်စတင်သုံးစွဲနိုင်ခဲ့သောနိုင်ငံများအတွင်း ဒုတိယ နိုင်ငံဖြစ်သည်။ထိုအချိန်မှစ၍ အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံ၏အိုင်စီတီအခြေခံအဆောက်အဦများတိုးတက်စေရန်အတွက် သိသာထင်ရှားသောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသားအခြေခံအဆောက်အဦးများသည် နက်ဝပ်ကြီးနှစ်ခုအပေါ်၌ မူတည်နေသည်။
အီရန်သည်၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၌ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ခဲ့သူတို့အတွင်းဒုတိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အစိုးရမှ နိုင်ငံ၏အိုင်စီတီအခြေခံအဆောက်အဦများတိုးတက်စေရန်သိသာထင်ရှားသောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အီရန်နိုင်ငံ၏အမျိုးသားရေးကိုအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအခြေခံအဆောက်အဦးများသည် အဓိကကွန်ရက်နှစ်ခုပေါ်တွင်အခြေခံသည်။၎င်းတို့မှာ အများပြည်သူတယ်လီဖုန်းကွန်ရက် (PSTN) နှင့်အများပြည်သူဒေတာကွန်ရက် switchedတို့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ PSTN အများအားဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်လိုင်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်-အသုံးပြုသူများသည် (ISPs) များအတွက်ကွန်နက်ရှင်ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် modem-based ဆက်သွယ်မှုအားထောက်ခံပေးသည်။ အီရန်၏ဒေတာများ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ (DCI)သည် TCI ၏လက်အောက်ခံ လူထုဒေတာကွန်ရက် မှထိန်းချုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အီရန်နိုင်ငံ၏ပြည်ပအင်တာနက်လင့်များကို အင်တာနက်ပရိုတိုကော၊ပရိုတိုကော TCP / IP TCP / IP (ရွှေ့ပြောင်းထိန်းချုပ်မှု ပရိုတိုကော /အင်တာနက်ပရိုတိုကော) သီးသန့်ဂြိုဟ်တုကနေတဆင့် အသုံးပြုသည်။ ဒေတာလိုင်းများအတွက် ကြေးနီ၊ ဖိုင်ဘာ၊ ဂြိုဟ်တုများနှင့်မိုက်ခရိုဝေ့ရရှိနိုင်သောမီဒီယာများဖြစ်သည်။၎င်းအပြင် မြန်ဆန်နှုန်းကောင်းပြီးအကောင်းဆုံး အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Digital Subscriber Line (DSL), High-bandwidth ငှားရမ်းလိုင်းများနှင့်ဂြိုဟ်တုကနေတစ်ဆင့်ဖြစ်ကြသည်။ အီရန်မြို့ကြီး၃၃ မြို့အကြား Trans-Asia-Europe သို့မဟုတ်ဥရောပမှတရုတ်ကိုဆက်သွယ်ထားသော"ပိုးလမ်း" မှတဆင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နေကြသည်။ အီရန်၏စာရင်းအင်းရေးစင်တာရဲ့အဆိုအရ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၃.၅သန်း (အီရန်နိုင်ငံသား၅၅.၅%) အင်တာနက်အသုံးပြုကြသည် (၂၀၁၆)။၎င်းတို့အတွင်းမှအိမ်ထောင်စုပေါင်း၇ သန်း ကျော်သည် မြန်နှုန်းမြင့်သော ကြိုးဖုန်းအင်တာနက် ချိတ်သွယ်ထားလေသည်။ အိမ်ထောင်စုပေါင်း၁၀.၇သန်းကြိုးမဲ့မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်သုံးစွဲလျှက်ရှိသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်မြို့ပြအိမ်ထောင်စုများ၏ ၆၄.၈% နှင့်ကျေးလက်အိမ်ထောင်စုများ၏ ၃၆.၁% သည်မိမိတို့၏နေအိမ်များတွင် ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများအသုံးပြုနေသည်။ .
၂၀၀၅ခုနှစ်မှစ၍ အီရန်အစိုးရသည် အမျိုးသားအင်တာနက်ကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ လိုင်းကို ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အညီ မြန်ဆန်မှုနှုန်းကိုလည်း မြှင့်ခဲ့သည်။ ထိုပရောဂျက်သည် ကမ္ဘာ့ဝဘ်နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ World Wide Web မှသီးခြားဖြစ်သည့်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုစီမံကိန်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ဤ ကွန်ယက်အား အထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းအသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး အခြားသောကွန်ယက်များနှင့် တူညီမှုမရှိပေ။ ထိုကဲ့သို့သောကွန်ရက် မြောက်ကိုရီးယားတွင်လည်း အသုံးပြုသည့်အတွက် မလိုလားသော သတင်းအချက်များကို ပြည်ပမှ ပြည်တွင်း၌ အသုံးပြုသကဲ့သို့ ဤစနစ်အတွင်း ထည့်သွင်းနိုင်သည်။မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကူဗားနိုင်ငံတို့သည်လည်း ထိုကဲ့သို့သောကွန်ရက်များကို အသုံးပြုလျှက်ရှိသည်။ အီရန်၏ ရှိရှိသမျှသော ရုံးဌာနများ နှင့် ဝန်ကြီးရုံးများအားလုံးအနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များလုံခြုံမှုရှိရန် အမျိုးသားအင်တာနက်ကွန်ကိုသာ အသုံးပြုကြရန် အီရန်မှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့လေသည်။
လက်ရှိအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကို အမျိုးသားသတင်းအချက်အလက်ကွန်ရက် (nin) သို့မဟုတ် " 'အမျိုးသာအင်တာနက်ကို" သို့မဟုတ် "သန့်ရှင်းအင်တာနက်"ဟူ၍ခေါ်ပြီး မည်သည့်အရာနှင့်မျှ အစားထိုးသွားမည်မဟုတ်ပေ။ အီရန်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လျှိုဝှက်ထားမှုများကို ကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ, အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများအတွင်းမှ အချို့ သည် လူအများ nin အင်တာနက်ကွန်ယက်ကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် လတ်တလောအချိန်တွင် ပြည်တွင်းရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်စက်များ ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိသည်။ .
အမေရိကန် အခြေစိုက်နည်းပညာကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသော google , Twitter Microsoft တို့အား အမေရိကန်တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ အွန်လိုင်းတွင် အီးမေးလ်နှင့် လူမှုကွန်ယက်များ၌ ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များပြုလုပ်သည်ဟု အီရန် အရာရှိများက စွပ်စွဲပြောဆိုကြသည်။ ထိုကုပ္ပဏီများသည် ထိုသို့စွပ်စွဲချက်များကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ထုတ်ဖော်ထုတ်ရေးတွင် တက်ရောက်ခဲ့မှု ရှိသော်ငြားလည်း ငြင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသော အင်တာနက် အသုံးပြုမှုများသည် ပြည်ပစံချိန်စံညွှန်းများ အတိုင်း ဖြစ်ပေသည်။ NIN ဖြင့် အွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်စစ်တမ်းအရ ကမ္ဘာ့စံချိန်မှီခဲ့ပြီး ၄၆ ရာခိုင်နှုန်း အသုံးပြုမှုရှိခဲ့သည်။.
အီရန်နိုင်ငံတွင် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံဖြိုးမှုဥယျာဉ် အိုင်တီဥယျာဉ် သည် ဖွံဖြိုးနေ(သို့မဟုတ် ဖွံဖြိုးဆဲရှိ)ပြီး ဒေသခံအီးမေးလ်များ, Tehran Data မှ တီထွင်ထားသော အရေးပေါ် မက်စစ်ပို့ကွန်ယက်များရှာဖွေစစ်များဖြစ်ကြသော Yooz ၊ Parsijoo ၊ Gorgor နှင့် Esam.ir ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ အီလက်ထရောနစ်ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားမှုများဥပမာ Digikala အီလက်ထရောနစ် အစိုးရ အပြင် အဝေးသင်ကြားမှုများ ဥပမာ (Payame Noor တက္ကသိုလ်) ၊ လူမှုကွန်ယက်များဖြစ်ကြသော Cloob သို့မဟုတ် Aparat အများ၏ပြည်တွင်းဗားရှင်း Linux " မှ Sharif Linux " ကို web browsing အတွက်, စကားလုံးအပြောင်းအလဲနဲ့, spreadsheet နှင့်ဒေတာဘေ့စဘို့ bespoke သို့မဟုတ် Open Source ဆော့ဖ်ဝဲကိုခေါ် Linux ကို Operating System စာရင်းကိုင်နှင့်အမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း / ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှု software ကို (ဥပမာ NOSA), လုံခြုံရေးဆော့ဝဲ (Shiraz တက္ကသိုလ်မှဥပမာ, Padvish Antivirus ကိုသို့မဟုတ်ယား), နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ အတွက်အခြေခံအိုင်တီ အဆောက်အဦးများ တိုးချဲ့လျှက်ရှိသည်။.
အီရန်သည်လည်း ကွန်ပြူတာ ပစ္စည်းများအပြင် အင်တာနက်နှင့် အိုင်တီ ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည်။ယင်းထုတ်လုပ် ကုန်များတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်များမှာ ပြည်တွင်းဒေတာစင်တာ၊ မိုက်ကရို ပရောစစ်ဆာများ(လုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်ဆောင်ရွက်ပေးသောစက်)(သီးသန့်ဒီဇိုင်း) PCB များ စူပါကွန်ပြူတာများ ၊ရောက်တာများ (အခြေခံ စမ်းသပ်မှု) ၊ ကွန်ပြူတာမောနီတာများ၊ပရင်တာများ၊မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ အလင်းဖန်မျှင်နှင့်လေဆာများဖြစ်ကြသည်။.
အီရန်ကာကွယ်ရေး နည်းပညာအဖွဲ့အစည်း (အမေရိကန်စစ်တပ်နှင့်လုံခြုံရေးဌာန)အရ အီရန်သည် ဆိုင်ဘာရှိသော နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံ တွင် တစ်နိုင်ငံအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ .
အီရန် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိနေသော အီရန်၏တယ်လီကွန်မြူနီကေးဖွံဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ(DCI) သည် (ယခုပုဂ္ဂလိက) နှင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာများအတွက်အီရန်သုတေသနအဖွဲ့အစည်း (IROST) အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုတို့သည် ISP များအဖြစ်လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိ သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မှစ၍ အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကပိုင် ISPသည် Parsnet ဖြစ်ပြီးတီဟီရန်ကိုသာတာဝန်ယူထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။ ပြည်နယ်ကို ကို ထိန်းချုပ်သော ISP သည် Isfahanတွင် အခြေစိုက်သည့် Irangate.net ဖြစ်ပါတယ်။ Neda Rayaneh အစည်းအရုံးသည် အီရန်နိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂလိက ISP ကဖြစ်ခဲ့သည်။
နောက်ဆက်ပုဒ်တွေနှင့် ဝဘ်ဆိုက်လိပ်စာဖြစ်သည့် (. ir ) ဒိုမိန်းအမည်များကို သီအိုရီရူပဗေဒအတွက်လေ့လာရေးအင်စတီကျုနှင့်သင်္ချာ (IPM) ကတာဝန်ပေးအပ်ထားသည်။ DCI သည် ကွန်ယက်အခြေခံအဆောက်အဦးများကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ အများဆုံးအဓိကမြို့ကြီးများဖုံးလွှမ်းသော IRANPAK X.25 packet -switching ကွန်ရက်မှတဆင့်အင်တာနက်ပေးလေသည်။ DCI သည် ပါမီနစ်ရှိသော ISP ဖြစ်ပြီး အစိုးရအေဂျင်စီများကို ထောက်ပံ့မှုများပေးသည်။DCI dial-up နှင့်၎င်း၏အသုံးပြုသူများငှားရမ်းထားသော လိုင်းများနှစ်ဦးလုံးအားဖြန့်ဖြူးပေးထားသည်။.
အီရန်၏စည်းမျဉ်းများအရ ဤ ISP များသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်မှု ကျယ်ပြန့်စေရန် အတွက်အီရန်၏တယ်လီကွန်မြူနီကေးကုမ္ပဏီ (TCI) အပေါ်မှီခိုသင့်ပေသည်။ ယခင်က TCI’s Public Switch Telephone Network, တယ်လီဖုန်းကွန်ယက်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ ISP များသည် ခေတ်မီ ခေတ်သစ်ဒေတာလိုင်းစွမ်းရည် ကို အမျိုးသား IP-based ကွန်ရက်မှတဆင့်ပေးခဲ့ကြသည်။ ကွန်ယက်အသစ်၏ပြီးစီးမှုနှင့်အတူအီရန်၏အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများသိသိသာသာတိုးတက်လာဖို့မျှော်လင့်ရသည်။
အီရန်အင်တာနက်သည် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၂ မီဂါဘိုက် အမြန်နှုန်းရှိပေသည် ။ ကမ္ဘာ့အမြန်နှုန်း၏ တစ်ဆယ်ပုံတစ်ပုံခန့်ဖြစ်သည်(၂၀၁၄)။ ဟောင်ကောင်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အင်တာနက်အမြန်နှုန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး တစ်စက္ကန့်လျှင် ၇၂ မီဂါဘိုက်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ကမ္ဘာ့အမြန်နှုန်းအဆင့် ၃၁ နေရာတွင် ရှိနေပြီး အမြန်နှုန်း အားဖြင့် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၂၁ မီဂါဘိုက်ရှိသည်။ အင်တာနက်အမြန်နှုန်း၂ မီဂါဘိုက်အတွက် တစ်လ ကုန်ကျစရိတ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုမှာ ၆၀ ¢/GB ဖြစ်သည် ။ သို့သော် ညပိုင်းတွင် အသုံးပြုမှုသည် အခမဲ့ဖြစ်၍ အသုံးပြုမှုမှာ ၅ GB အထိဖြစ်သည်။ Upload အမြန်နှုန်းသည် download အမြန်နှုန်း၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
၂၀၀၀မှ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း လူတစ်ထောင်တွင် အင်တာနက် အသုံးပြုသူများပြဇယား ဒေသ: ကမ္ဘာ့ဘဏ်
၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၁ လပိုင်းမှစ၍ (PAPs) နှင့် TCI တို့သည် WiMAX ADSL2 + ဈေးကွက်နှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုပေးရေးများ၌ ယှဉ်ပြိုင်လျှက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုအတွင်း၌ ကျယ်ပြန့်သောပုံသေ အင်တာနက်လိုင်းချိတ်ဆက်မှု သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းလိုင်းပေါင်း ၈.၃ သန်း အထမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ အီရန်ရဲ့ IP-based '' အမျိုးသားရေးဒေတာကွန်ရက် '' ကိုလည်း TCI လက်အောက်ခံဖြစ်သည့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာကုမ္ပဏီ (ITC), ကတီထွင်လျက်ရှိသည်။ထိုကွန်ရက်သည် မြို့ပေါင်း ၂၁၀ ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပြီး လူတို့၏ လိုအပ်ချက်များ(ဥပမာ အင်တာနက်အသုံးပြု၍ လုပ်ကိုင်ရသောအလုပ်များ)ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် မြန်နှုန်းမြှင့် စခန်းပေါင်း ၆၀၀၀၀ ကိုလည်း စီမံထားလေသည်(၂၀၀၉)။ အချို့သော လုပ်ဆောင်မှုများသည် အခြေခံအဆောက်အဦးများတည်ဆောက်ရန်နှင့် ကျယ်ပြန့်စွာဝန်ဆောင်ပေးနိုင်ရန်အတွက် လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ရန် စီမံထားသည်။ ထို့အပြင် အချို့သော ပုဂ္ဂလိကကုပ္ပဏီများအား WiMAX ဝန်ဆောင်မှုကို လေလံအနေအထားဖြင့် ခွင့်ပြုပေးရန် အစီအစဉ်များရှိပြီး တတိယ ခွင့်ပြုမှုသည် မိုဘိုင်းဖုန်း အော်ပရေတာများ ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်။
၂၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အီရန် အင်တာနက်အကျိုးစီးပွားသည် ၈ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး သို့သော် ဗြိတိန် တွင် ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ (ISPs) : အင်တာနက်အမြန်နှုန်း မြှင့်တင်ရန်အတွက် လက်မှတ် ၁၂ ခုရေးထိုးခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အီရန်တွင် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးရေး (ISPs) ပေါင်း ၁၂၂၃ ခုရှိပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံကုဒ် များCountry code (ထိပ်တန်းအဆင့်ဒိုမိန်း):IR
(အင်တာနက်ကဖေးအသုံးပြုသူများသည်အပါအဝင်) အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ: ၂၃ သန်း (၂၀၀၇); ၄၃ သန်း (၂၀၁၂) ။ အင်တာနက်သည်လူဦးရေ၅၃%နှင့်တီဟီရန်မှာရှိတဲ့၇၇%ကိုကျော် ဖြတ်၍ထိုးဖောက်ခဲ့သည်ဟအစိုးရအချက်အလက်များအရသိရသည်။ ခန်းမှန်းခြေ ၁၁ သန်းအီရန်နိုင်ငံသားမိုဘိုင်းအင်တာနက် အသုံးပြုမှု ရှိသည်(၂၀၁၄ ) ။ အီရန်နိုင်ငံ၏အမျိုးသားကအင်တာနက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနမှ အင်တာနက်ထိုးဖောက်မှုသည်အီရန်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် 73% အင်တာနက်သုံးစွဲသူနေရာတွင်ရပ်တည်လျှက်ရှိသည်ဟုပြောခဲ့သည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် အများဆုံးအင်တာနက်အမြန်နှုန်းအမြင့် အသုံးပြုသူများဦးရေနေ့စဉ် ၂၅၀၀၀၀အထိရှိသည် (အောက်တိုဘာလ ၂၀၀၆) ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် ဘရော့ဘန်းအင်တာနက်အသုံးပြုမှုသည်၁၄အဆင့် ၌သာရှိသည်(၂၀၁၂) ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်အချို့ ၈၆၇၀၀၀ ဦးရေသည် မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်အသုံးပြုနေပြီးလူဦးရေ၆ သန်းသည် optical fiber ကွန်ရက်ကနေတဆင့်အင်တာနက်ကို အသုံးပြု. ရသည်။။
အီရန်နိုင်ငံတွင်GPRS အသုံးပြုသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အင်တာနက်သုံးစွဲသူ ၂၇.၅ သန်းအထိပမာဏရှိသည်။
အီရန်သည် ဝက်ဆိုက်အရေအတွက်များအရ ကမ္ဘာ့ အဆင့်၃၂နေရာတွင် ရှိပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ ဝက်ဆိုက်ပေါင်း၂၀၀၀၀၀ လွှတ်တင်ထားပြီးဖြစ်သည်။၁၁၈၀၀၀ ဝက်ဘ်ဆိုက်များဒိုမိန်း ".ir" ကို အသုံးပြု. ရသည်။
၂၀၁၆ နှစ်အတွင်း, အီရန်တွင် အများဆုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့သောကွန်ရက်စာမျက်နှာများမှာ Google (1st), Parsijoo (2nd), Bing မှ (3rd), Yooz (4th) ဖြစ်ကြသည်။
အီရန်တွင် မြို့ပေါင်း ၁၂၁၈ မြို့တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ထိုမြို့ကြီးများတွင် ဆက်သွယ်ရေးစင်တာပေါင်း ၁၄၆၀ ခုရှိသည်(၂၀၀၈)။
အီရန်သည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ကီလိုမီတာပေါင်း ၁၂၀၀၀၀ကျော် ရှည်လျှားသော အလင်းဖန်မျှင် ကွန်ယက် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့သည်(၂၀၀၈)။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ ကီလိုမီတာပေါင်း ၃၆၀၀၀ ကျော်အလင်းဖန်မျှင် ကို အမာခံကွန်ယက်များအဖြစ်လည်းကောင်း ကီလိုမီတာပေါင်း ၄၅၀၀၀ ကို မြို့ပြ ကွန်ယက်အသုံးပြုမှုအတွက်လည်းကောင်း တပ်ဆင်ပြီးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
တီဟီရန်မြို့၏နေရာအနှံ့အပြားတွင် ခန့်မှန်းခြေ အင်တာနက်ကဖေးပေါင်း ၁၅၀၀ ခန့်ရှိသည်(၂၀၀၈)။ ကြိုတင်ငွေပေး အင်တာနက်အသုံးပြုမှုသည် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုလျှက်ရှိသည်။
၂၀၀၈ခုနှစ်မှစ၍ ၁၀၀ ကျော်ကုမ္ပဏီ၁၀၀ ကျော်သည်နိုင်ငံတကာ VoIP ကတ်များရောင်းချရန်နှင့်အစိုးရအမျိုးသားရေးအသုံးပြုမှုအတွက်လေလံကိုင်ပြီးမှတဆင့် ၄-၅VoIP လိုင်စင်ထုတ်ပေးမှကြေညာခဲ့သည်။
အင်တာနက် အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုသည် အီရန်နိုင်ငံမြို့အသီးသီးတွင်ရှိနေသည်။ ထို့အပြင် အလျှင် အမြန်လည်း တိုးမြင့်လျှက်ရှိသည်။ သေးငယ်သော မြို့ပြလေးများနှင့် ကျေးလက်ဒေသများတွင်လည်း အင်တာနက် ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အစိုးရသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ အစိုးရဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စီးပွားရေးဂဏ္ဍ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အင်တာနက်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပြုရန် ဆန္ဒရှိခဲ့သည်။ ၎င်းအပြင် ထိုအချိန်ကာလကတည်းမှ စာသင်ကျောင်းတိုင်းတွင်လည်း ကွန်ပြူတာများဖြင့် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ကာ သုံးစွဲစေခဲ့သည်။အင်တာနက်သည် အလွန်မှပင် လူငယ်များအဖို့ အချက်အလက်များနှင့် တင်ပြချက်များ ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အကျယ်ပြန့်ဆုံးသော အကြောင်းခံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အီရန်သည် ကမ္ဘာတွင် ဝက်ဘလော့ဂ်ရေးသားရာတွင် စတုထ္ထအဆင့်တွင်ရှိသည်။ ယခုချိန်ထိ ဖါရ်စီ ဝက်ဘလော့ဂ်ပေါင်း ၆၀၀၀၀ ကျော် ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အီရန်တွင် အင်တာနက်ကို စင်ဆာပြုလုပ်ထားပြီး ကမ္ဘာတွင် အီရန်သည် အင်တာနက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အလုပ်အရှုပ်ဆုံးနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအရှိဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ၇၆.၄ ရာခိုင်နှုန်းသော် (အသက်၁၅နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အတွင်း)ရှိ အီရန်လူငယ်တို့သည် အင်တာနက်အသုံးပြုလျှက်ရှိသည်။ ၆၉.၃ ရာခိုင်နှုန်းလူငယ်တို့သည် ဖီလ်တာ ချိုးဖေါက်နိုင်သော ဆော့ဝဲများကို အသုံးပြု၍ ပိတ်ထားသော ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ဝင်ကြည့်လျှက်ရှိသည်။ အီရန်နိုင်ငံသား ငါးပုံမှသုံးပုံတို့သည် ဖေ့ဘုက် အသုံးပြုသူများဖြစ်ကြသည်။အီရန်နိုင်ငံသားတို့သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အများသုံးလူမှုကွန်ယက်များကို တနေ့လျှင် ၉ နာရီမျှ အချိန်ပေး၍ အသုံးပြုလျှက်ရှိကြသည်။အီရန်အစိုးရ၏ ပြောကြားချက်အရ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ဟူးရှ်မန်း ဖလ်တာ သည် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုသော အကြောင်းအရာ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းအင်တာနက်အသုံးပြုသော တိုင်းသူပြည်သားများအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
FIran's အီလက်ထရောနစ်စီးပွားရေးစနစ် မှဝင်ငွေ သည် မတ်လ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဘီလီယံ ၁၀၀၀၀ ရေယာလ် (၁ ဘီလီယံ ဒေါ်လာ) ဖြစ်ခဲ့သည်။ထို့အပြင် နှစ်စဉ် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အွန်လိုင်းရောင်းမှုသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀ ထိရှိခဲ့ပြီး နေ့စဉ် အွန်လိုင်းအရောင်းဌာန ပေါင်း ၂၀၀၀၀ ကျော်သည် လှုပ်ရှားလျှက်ရှိသည်။ အီလက်ထရောနစ် ဈေးကွက်ရောင်းဝယ်ရေးသည် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Tetra-Tech IT မှ ကြေငြာခဲ့သည်မှာ ခရီးသွားများနှင့် အီရန်တိုင်းသူပြည်သားများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် လက်မှတ်အရောင်းဌာနများ ဟိုတယ်များနှင့် စားသောက်ဆိုင်များအပြင် အဝေးပြေးဂိတ်များနှင့် အရောင်းစင်တာများတွင် VISA နှင့် MasterCard စတင်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း နှင့် အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း ဖြစ်သည်။ ဆာမားန်ဘဏ်သည် အီရန်တွင် ပထမဦးဆုံး အွန်လိုင်းစနစ်ကို စတင်အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ခဲ့သော ဘဏ်ဖြစ်သည်။ထိုအချိန်မှစ၍ အီလက်ထရောနစ် စနစ် ဝန်ဆောင်မှုကို ပထမတန်းထား၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပိုမိုဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရန် စွမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် နည်းပညာဖန်တီးရှင် အစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် အွန်လိုင်းစူပါမာကတ်တစ်ခုအား ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ထူထောင်ခဲ့သည်။။
၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် အီလက်ထရောနစ် ဈေးကွက်စနစ်မှ အောင်မြင်မှုသည် ၁၇.၄ ဘီလီလံ ဒေါ်လာအထိရှိခဲ့သည်။ အမျိုးသားရေးသတင်းအချက်အလက်ကွန်ယက်အသစ် နှင့်အတူ အင်တာနက် မြန်နှုန်းသည်လည်း အရှိန်အဟုန်မြင့်၍ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အင်တာနက်ထိုးဖေါက်နိုင်စွမ်းသည် ၈၂.၁၂ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်(၂၀၁၆) ။ လူဦးရေ၁၉ သန်းသည် မိမိတို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုရှိနေသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ စ၍ မြို့ပေါင်း၆၀၀ တွင် 3G ကွန်ယက်စနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ခဲ့ကြပြီး မြို့ပေါင်း ၂၀၀ တွင် 4G ကွန်ယက်စနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည်။ အီရန်တွင်မိုဘိုင်းဖုန်းထိုးဖေါက်နိုင်စွမ်းသည် ၉၄.၄၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။
အီရန်လက်ရှိ e-commerce နှင့်အခွန်စုဆောင်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ရန်အတွက်တိုင်းပြည်အနှံ့ဘားကုဒ်စနစ်ကအကောင်အထည်ဖော်နေသည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းကုန်စည်အကြီးဆုံးဝယ်လက်ဖြစ်သောအလုပ်အမှုဆောင်ပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းများသည်, "Irancode" မပါသောကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူအသုံးမနိုင်ပေ။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Majlis မှ လက်ထရောနစ်ကူးသန်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်:
ဤဥပဒေ၏အကြောင်းအရာ 62-66 အီရန်နိုင်ငံ၏တည်ဆဲဉာဏ်-ပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေတွေအားလုံးအီလက်ထရောနစ်အရောင်းအဖို့လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
အကြောင်းအရာ ၃၃-၄၉ သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ် အီလက်ထရောနစ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဥပဒေ အီလက်ထရောနစ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုဖြစ်သည်။ ယင်းဥပဒေသည် အသုံးပြုသူများကို ရောင်းဝယ်မှုပြုနေစဉ်အတွင်း အပြည့်အဝ ထောက်ပံ့မှု ပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ထိုအတိုင်းပင် အီလက်ထရောနစ် စာချုပ်များကို ပယ်ဖျက်လိုက ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အပိုဒ် ၃၇ အရ ဝယ်သူများသည် ၇ ရက်အတွင်း မည်သည့် ပြစ်ဒဏ်မှ မပါပဲ ဝယ်ယူသူနှင့် စာချုပ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အပိုဒ် ၄၂ အရ ဤဥပဒေသည် မပြောင်းရွှေ့နိုင်သော ပစ္စည်းများ ၊ အော်တိုမစ်တစ် စက်များ ဟန်းစက်များ ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားမှုများမပါဝင်ပါ။
အဆိုပါ ပဉ္စမငါးနှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်(၂၀၁၀-၁၅) သည်လက်ထရောနစ်ရောင်းဝယ်မှုအတွက်ပစ်မှတ်ထားဆောင်ရွက်သည်၊:
အဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များပေါ်တွင်အီလက်ထရောနစ်ဂျာနယ် (EJISDC) ၏အဆိုအရ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ ဌာန(ICT) သည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ၁.၁-၁.၃ ထိ ဝင်ငွေရှိခဲ့သည်။ထို့အပြင် လူဦးရေ ၁၅၀၀၀၀ ခန့် သည် နည်းပညာနှင့် သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဌာနများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။ထိုအတွင်းမှ လူဦးရေ ၂၀၀၀၀ ကျော်သည် ဆော့ဝဲ ရေးဆွဲသောနေရာများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ကုပ္ပဏီပေါင်း ၁၂၀၀ ကို နည်းပညာနှင့် သတင်းအချက်အလက် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အတွင်းမှ ၂၀၀ ခန့်သည် ဆော့ဖ်ဝဲ ရေးဆွဲထုတ်လုပ်သော ကုပ္ပဏီများဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဆော့ဝဲ ထုတ်လုပ်မှုသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀ သန်းခန့်ရှိပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်လာ ၄၀၀ သန်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
အီရန်က၎င်း၏ software ကို၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ဈေးကွက်အတွင်း တင်သွင်းသည်။ အဆိုပါ EJISDC ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် အရပြည်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်း ၏ ၉၅% ဝန်းကျင် သည် ဖွံဖြိုးတိုးတက်သော ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း (နိုင်ငံခြားအရင်းအမြစ်မှဘာသာပြန်ချက် / လိုက်လျောညီထွေမှုအပါအဝင်) အခြားကုန်များ ၏ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်လုပ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများ Sena ဖျ, Dadeh-Pardazi, အီရန် Argham, Kafa System ကိုပြန်ကြားရေးကွန်ယက်, အီရန်စနစ်နှင့် Puya ပါဝင်သည်။ IDRO ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ "Magfa" (သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာန) နှင့်အီရန် Info-Tech ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီလည်းဤကဏ္ဍတွင်ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ အီရန်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲထုတ်လုပ်သူ တွေနဲ့ Hamkaran စနစ်နှင့် ဖေါက်သည် ၇၀၀၀ ရှိသည်။
အီရန်နိုင်ငံ၏အမျိုးသားဖောင်ဒေးရှင်းမှကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းဗွီဒီယိုဂိမ်းများကို ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် စတင်အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့သည်။ထိုဂိမ်းများသည် တစ်ချိန်တည်းမှာအသုံးပြုသူ ၅၀၀၀ သည် တစ်ပြိုင်တည်းကစားနိုင်သည်။
တီဟီရန်တွင် ဆော့ဖ်ဝဲ စက်မှုစက်ရုံခွဲများမရှိပေမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲနည်းပညာနှင့် အချက်အလက်နည်းပညာ ပျိုးဥယယ၏ယျာဉ်တစ်ခုကို တီဟီရန်တွင် စီမံထားလေသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံဖြိုးရေးအိုင်ယာလန်ကို ဤစီမံကိန်းအတွက် အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထိုအတိုင်းပင် နည်းပညာအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးများ ပါရှိထားပြီး ဖြစ်သည့် ပါးရှန်းပင်လယ်တွင်းရှိကီးရှ်ကျွန်း အခမဲ့ကုန်သွယ်ရေးဇုန် ၌ နည်းပညာပျိုးဥယျာဉ်အတွက်စီမံကိန်းများရှိထားလေသည်။
လက်မှုထုတ်ကုန်များကို စက်မှုအဖြစ် အလိုအလျှောက် ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် တောင်းဆိုမှု၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အစိုးရဘက်မှ ထောက်ပံ့ပေးရန် မျှော်လင့်ထားသည်။ ထိုအတိုင်းပင် ပုဂ္ဂလိက ပိုင် အလုပ်ရုံများ၁၅၀၀၀ခန့်တွင် ဆော့ဖ်ဝဲ လိုအပ်မှုများရှိနေပေသည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည် နည်းပါးပေမဲ့ အချို့သော ဆက်ဆံမှုများတွင် အိန္ဒိယ ဆော့ဖ်ဝဲစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်နွယ်၍ တိုးတက်ဖွံဖြိုးလျှက်ရှိသည်။အီရန်တွင် ဉာဏမူပိုင်ခွင့်အားနည်းသည့်အချက်သည် အီရန်၏ ဆော့ဖ်ဝဲကုပ္ပဏီများ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပျက်ပြားစေသည့်အတွက် ထိုအကြောင်းအရာအပေါ် ပြည်ပမှ တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု မပြုကြချေ။
အီရန်သည်လူဦးရေသန်း၈၀ ရှိသော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဤနိုင်ငံအတွင်း မိုဘိုင်းဖုန်းထိုးဖေါက်မှုနှုန်းသည် ၁၂၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းနည်းပညာ "start-up စီးပွားရေးကို" အီရန်နိုင်ငံ၏ဂျီဒီပီ၏ ၁% ထက်လျော့နည်းကိုယ်စားပြုတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းကအီရန်ရဲ့ startup ဂေဟစနစ်ထွန်းကားခဲ့သည်။ Wall Street Journal မှအဆိုအရပိတ်ဆို့မှုများသည် အီရန်၏ တီထွင်မှုများကို အားပေးကူညီခဲ့သလိုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကာစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုကိုကူညီပေးနေကြသည်။ အီရန်တွင် အပင်ပေါက်မြန်သော မျိုးစေ့သုံးစေ့ရှိသည်(ဥပမာ Avatechနှင့် DMOND) ၊ VCs အချို့ (ဥပမာ- Sarava Pars နှင့် Shenasa) incubator (ကြက်ဘဲစသည်တို့အား သားဖေါက်ကရိယာ) ပေါင်း ၁၇၀ (ဥပမာ MAPS)နှင့် အီလက်ထရောနစ်စီးပွားရေးစနစ်သည် လက်ရှိအနေအထားတွင် ဖွံဖြိုးလျှက်ရှိသည်။အင်တာနက် မြန်နှုန်း မြင့်မားလာမှုသည် စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုများအတွက် ကာလတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ (IEA) အီရန်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုအသင်းသည် အီရန်ရှိ "စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုတော်လှန်ရေး" တွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အန်ဂျီအိုဖြစ်သည်။ TechRasa အွန်လိုင်းမီဒီယာသည် နည်းပညာဖန်တီးမှု များတွင် ထောက်ပံ့ပေးသော မီဒီယာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ အီရန်တွင် startups နည်းပညာကုပ္ပဏီ ၁၈၀ ခန့်ရှိပြီး ၎င်းတို့အတွင်းမှ အများအပြားသည် state-run သက္ကသိုလ်များမှ ထောက်ပံ့မှုပြုထားလေသည်။ ဤ အရေအတွက်သည် အီရန်တွင် အလုပ်လုပ်လျှက်ရှိသော (အိုင်တီမဲ့) ပညာအခြေခံ ကိုပ္ပဏီများ၃၀၀၀ မပါဝင်ပါ) အီရန်တွင်၂၀၁၆ ခုနှစ်မစ၍ fintechကုပ္ပဏီ၅၀သည် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။
Parsijoo နှင့် Yooz အသီးသီးတို့သည် ပြည်တွင်း ဝဘ်ရှာဖွေရေးစက်စနစ်များဖြစ်ကြပြီး တစ်နေ့လျှင် 600,000 နှင့် 100,000 hits နှင် 120000 နှင့် 60,000 ရှာဖွေမှုများကိုပြုလုပ်သည်။ Adro သည် Adtech / Ad Ad Exchange ကုပ္ပဏီတို့၏ ဦးဆောင်ဖြစ်သည်(၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသူတို့သည် ၃၆၅ ဘီလီယံ အီရန်Ad_networks ထံမှ လျှော့ပေါ့မှုကိုရရှိခဲ့ကြသည်)။ Cafe Bazaar သည် ရက်တစ်ပတ်လျှင် ဝင်ကြည့်သူ သန်းပေါင်း၂၀ ရှိပြီး ဈေးကွက်ပိုင်ဆိုင်မှု ၈၅ရာခိုင်နှုန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အီရန်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဂိမ်းများအတွက် အပလီကေးရှင်းပေါင်း၂၅၀၀၀ ဖြစ်သောအများပြည်သူသုံး ဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ မက်စစ်ပို့ခြင်း စသဖြင့်အပ်ပလီကေးရှင်းများကို ဒေါင်းလော့လုပ်နိုင်သည်။အီရန်သည် ၂ နှစ်မပြည့်မီ (၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်) မိုဘိုင်း အပ်ပလီကေးရှင်းပေါင်း ၇၀၀၀၀ ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
Cloob Facebook သည်အီရန်ဗားရှင်းဖြစ်ပြီး ၂.၅ သန်းအသုံးပြုသူများရှိသည်။ Soroushသည် Telegramနေရာတွင်အစားထိုးထားသောစာတိုပေးပို့ရေး application ဖြစ်သည် ။ Aparat သည်(Saba Idea Co. နည်းပညာ တို့ကပိုင်ဆိုင်ထားသည်) ဝန်ထမ်းများ ၆၅နှင့်အတူ Youtube နှင့် အလားတူအီရန်ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေမှု ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လျှင် ၅ သန်းကျော် ဖေါ်လိုဝါ ရှိပြီးနေ့စဉ်အပ်လုဒ်တင်ပြီးဗီဒီယို ၂၂၀၀၀မိနစ်ရှိသည်။ Takhfifan( ဝန်ထမ်း၁၀၀နှင့်အတူ) နှင့် Netbarg နှစ်ခုသည်တွင်ကျယ်စွာဝယ်သော အုပ်စုနှစ်စုဖြစ်ကြသည်။ Esam နှင့် Saddarsad သည် eBay ဆင်တူသည်။ Digikalaသည် e-commerce အီလက်ထရောနစ်စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပြီး Amazon.com နှင့်တူပေသည်။နေ့စဉ်ပျှမ်းမျှဝင်ငွေ $ ၄၀၀၀၀၀နှင့်အတူ နေ့စဉ် အော်ဒါပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ရှိသည်ဝန်ထမ်း ၉၀၀ နှင် ဝင်ကြည့်သူ နေ့စဉ်၈၅၀၀၀၀ ရှိသည်။Digikala ၂၀၁၄ခုနှစ် $ ၁၅၀ သန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ $ ၅၀၀ သန်း၂၀၁၈ ခုနှစ် $ ၁ ဘီလီယံကျော်) တန်ဖိုးရှိဖြစ်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Digikal အပေါ်အီရန်e-commerce ၏ ၈၅-၉၀% (အီရန်တစ်လျှောက်လုံး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်မှုစနစ်ရှိသည်) Albasko အခြားလူသိ e-commerce ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Fidibo Kindle သည်အီရန်နှင့်ညီမျှသည်။ တစ်လလျှင် 40,000 အော်ဒါနှင့်အတူ Maman-Paz အိမ်ရှင်မ Home-ချက်ပြုတ်စားသောက်ရောင်းချနှင့်အတူဆာလောင်မွတ်သိပ်လုပ်သားများကိုဆက်သွယ်မယ့်အစားအစာပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏စားသောက်ဆိုင်သည်-based ရှိသော counterpart ZoodFood ဖြစ်သည်။ ShopFa, ၂၀၁၂ခုနှစ် ၂၀၀၀ တက်ကြွအွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များနှင့်အတူ, Shopify ၏ဒေသခံဗားရှင်းဖြစ်သည်။ (SamanSystems မှပိုင်ဆိုင်) ZarinPal, ၂၀၁၂ ခုနှစ်လုပ်ငန်းများ၌ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု၂ သန်းမှာအတူ PayPal မှအီရန်သည်အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Taskulu တစ်ဦးတာဝန်စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း ၁၂၀ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှ အသုံးပြုသူများ၈၀၀၀ကိုကျော်ရှိခဲ့သည်။ Hamijoo ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Navaak Spotify, အွန်လိုင်းဂီတ streaming များသည် ကုမ္ပဏီပြီးနောက်လိုက်ဖြစ်သည်။ AloPeyk တစ်ဦးဖြန့်ဝေဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ များစွာသောနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ (ထိုကဲ့သို့သောဂျာမဏီရဲ့ Rocket Internet ကဲ့သို့) အီရန်အတွက်နည်းပညာကုမ္ပဏီများစတင်ရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို (ထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု '' က Google ကဲ့သို့သော) တိုင်းပြည်အတွင်းရရှိနိုင်ဖြစ်လာခွင့်ပြုပါရန်နည်းလမ်းများကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့စတင်နေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အီရန်တွင်အင်တာနက် Group မှ, တောင်အာဖရိကဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ MTN နှင့် Rocket Internet အကြားဖက်စပ်ကို eBay (Mozando), အမေဇုံ (Bamilo), နှင့် Uber (Snapp / ယခင်ကတက္ကစီ Yaab အဖြစ်လူသိများ) ၏အီရန်ဗားရှင်းစတင်ခဲ့တာဖြစ်သည်။ Snapp အီရန်ဖြတ်ပြီး ၆၀၀၀၀၀ကျော်ယာဉ်မောင်းရှိပြီး $ ၁ ဘီလီယံ (၂၀၁၈ အတွက်ကုမ္ပဏီအညီ $ ၁.၄-၁.၇ဘီလီယံ) ၏အဘိုးပြတ်အလားအလာရှိသည်။ ဤသည်ဦးရေ ၁သန်းကျော်ခရီးသည်မှာ ပြည်ပမှပြန်လာပြီးအီရန်နိုင်ငံသားအတော်များများလည်းဤလမ်းကြောင်းသစ် (အထူးသဖြင့်အီရန်အမေရိကန်များ) တွင်ပါဝင်ကြသည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်အီလက်ထရောနစ်နှင့်နည်းပညာကဏ္ဍအသုံးပြုသူ GfK-MEMRB နှင့် ဈေးကွက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်လုပ်ငန်းခွဲခြင်း၏ လေ့လာမှုတစ်ခု အရသိရသည်မှာ $ ၃၇ဘီလီယံပမာဏ မြင့်တက်နေသည်(၂၀၀၈) ။ အဆိုပါလေ့လာမှုမှာ ၂၀၀၉ Mobile ဈေးကွက် နှင့်စမတ်ဖုန်းများအတွက် $ ၃၉- $ ည်၄၀ဘီလီယံဖိုးထိတိုးတက်မှု၏လှိုင်းကိုဆက်လက်စီးလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။ဤအကြောင်းအရာ desktop ဈေးကွက်ကို လိုက်မည့်ဈေးကွက်ဖြစ်ကြောင်း၂၀၀၈ခုနှစ်တွင်မျှော်မှန်းထားသည်။ $ ၁၀ဘီလီယံဖိုး အရောင်းနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကိုဝယ်ယူအသုံးပြုသူ၏ ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းကိုပါတက်စေပြီး $ ၅ဘီလီယံမှာကွန်ပျူတာမှတ်စုစာအုပ်များနှင့်$ ၄ ဘီလီယံမှာ LCD ရုပ်မြင်သံကြားများဖြစ်သည် ။ အဆိုပါလေ့လာမှုမှာ အီရန်နှင့်ယူအေအီးတွင် လွတ်လပ်သော လက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများ LCD ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ ဈေးကွက် ၆၀ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအဖို့ပုံဖေါ်သည်။ သို့သော် plug-ins, Emax နှင့် Sharaf DG များကဲ့သို့ကြီးမားသောလက်လီအရောင်းဆိုင်များအား လည်း၎င်းတို့ရှေ့ဝယ် ကျန်ရှိသော ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖမ်းယူခံစားလုပ်နေပေသည် ။ အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ်စားသုံးသူနည်းပညာကဏ္ဍတွင် ၂၀၀၈ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်း၌ $ ၂၄ဘီလီယံထက်မက လက်လီရောင်းချမှုကိုမျှော်လင့်ထားသည်။.
အီရန်နိုင်ငံအတွင်း အီလက်ထရောနစ်ဈေးကွက် အသုံးပြုသူများမှာ ဂဏန်းပေါင်းစက်၊ မိုင်ဘိုင်းဖုန်း၊စမတ်ဖုန်းနှင့် ဂိမ်းစက်များဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ၇.၃ ဘီလီယံ ဒေါ်လာ (၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်၈.၂ ဘီလီယံဒေါ်လာ) အပြင် ကွန်ပြူတာဆော့ဖ်ဝဲများဈေးကွက် ၄၇ ရာခိုင်နှုန်း ၊ အသံဆောဖ့်ဝဲ နှင့် ဗွီဒီယိုဆောဖ်ဝဲ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ မိုဘိုင်းဖုန်း ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ကြောင်း မှန်းဆထားသည်(PDA နှင့် ဟူးရှ်မန်ဒ် လက်ကိုင်ဖုန်းများအပြင် 3Gဖုန်းများ ဝယ်ယူသုံးစွဲမှု မြင့်တက်လာခဲ့သည်) အလုပ်ခွင်သုံး မော်နီတာ(BMI) အီရန်နိုင်ငံအတွင်း အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုသူများ လိုအပ်သော ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်လာမည် ဖြစ်သလို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၁၀ ဘီလီယံဒေါ်လာနှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၁၆ ဘီလီယံဒေါ်လာထိ မြင့်တက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။.
ELECOMP ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပနေလေ့ရှိပြီး ထိုပြပွဲသည် အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ကွန်ပြူတာ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အကောင်းဆုံးဈေးကွက် ပြသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။.
အီရန်သည် အများစုမော်နီတာ ဧရိယာထဲတွင် နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများလိုင်စင်အောက်၌ အချို့သောကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်လျှက်ရှိနေသည်။အီရန်ကုမ္ပဏီ ရှစ်ခုမှ LG, Samsung Hyundai, Benq, Tatung များကို CTX လိုင်စင်အောက်မှာမော်နီတာထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ motherboard, ကီးဘုတ်, မောက်စ်, ကွန်ပျူတာအမှု, ပါဝါထောက်ပံ့ရေး, CPU, hard drive နှင့်ပရင်တာများသည် ယခုပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်နေကြသည့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်။ အီရန်တွင် ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ (PC) ပိုင်ဆိုင်မှု၂၀၀၅ခုနှစ် ၇.၃ m, သို့မဟုတ်လူ ၁၀၀ နှုန်းတွင် ၁၀.၅ ဦး PC များပိုင်ဆိုင်မှု ရှိနေသည်။.
ပြည်တွင်းတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများအတွင်း Siemens နှင့် ပြင်သစ်၏ Alcatel-Lucent နှင့်အတူလိုင်စင်သဘောတူညီချက်များရှိ သောအီရန်တယ်လီဖုန်းထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ (ITMC) ဖြစ်သည်။ ITMC TCI (၄၅%), စက်မှုဘဏ် (၃၅%) နှင့် Siemens (၂၀%) ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ အီရန်ဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Parstel-အခြားထုတ်လုပ်သူရာဒေဝူးကော်ပိုရေးရှင်းသည် တောင်ကိုရီးယား ကုမ္ပဏီတခုလိုင်စင်အောက်မှာထုတ်လုပ်နေသည်။ IDRO ရဲ့အီရန် Info-Tech ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်အမည်သည် ကွန်ပျူတာများကို"SAHAND" အောက်မှာထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားအိုင်စီတီဟာ့ဒ်ဝဲရောင်းအားသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာအမေရိကန် $ ၇၀၀သန်း စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။
သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များသည် အီရန်နိုင်ငံ post နှင့်ပတ်သက်သောမူဝါဒများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးဌာနအချို့၏ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာဝန်ခံလည်းဖြစ်သည်။ ဤဝန်ကြီးဌာန၏ ယခင်အမည်မှာ "ကြေးနန်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန"ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အပိုဒ် ၄၄အရ အထွေထွေမူဝါဒများမှတ်ချက်ကို C အပေါ်အခြေခံပြီး, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာထိုကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီအဖြစ်တွဲဖက်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အစုရှယ်ယာ ရောင်းချပေးသွား လိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအပိုဒ် 44 ၏အထွေထွေမူဝါဒများအရ, တယ်လီကုမ္ပဏီများမှလေးခုအုပ်စုများအတွက်ခွဲခြားထားပါသည်:
အုပ်စု ၁ : ပြည်နယ်၃၀အတွင်းရှိ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များအနက် ပုံသေဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များသည် Tehran Isfahan, Fars, Hamedan, Ahvaz, Khorasan Razavi, Khuzestan နှင့်အရှေ့ Azarbaijan တို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ကွန်ယက်များဖြစ်သည် ။ ပထမအုပ်စုသည် လိုင်းဖုန်းများနှင့် လိုင်းကွန်ယက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည် ဥပမာ ပြည်နယ်အတွင်း ၌ အစိုးရကဏ္ဍတွင် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက် ၃၀ ထားပေးထားသည်။ယင်းကဏ္ဍသည် အစိုးရကုပ္ပဏီမဟုတ်သော Iraphone, Novin, Zahi, Kouh-e Nour, Montazeran Adlgostar နှင့် Pouya Ertebat ကုမ္ပဏီများမှပါဝင်သည်။
အုပ်စု ၂ သည် မိုဘိုင်းလက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည် ။ အစိုးရပိုင် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်သည် TCI ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်များမှာ Omran Kish, Arse Telecom, Isfahan, Rafsanjan Complex နှင့် Irancell တို့ဖြစ်ကြသည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ခွင့်ပြုမှုအဖွဲ့အစည်းမှ အီရန်၏တယ်လီကွန်မြူနီကေးကုမ္ပဏီ (TCI)သည် မိမိ၏ ရှယ်ယာများကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းတွင် စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်၌မျှောလိုက်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
အုပ်စု၃: မိုဘိုင်းကွန်ရက်နှင့် Shomal အိုင်တီကုမ္ပဏီ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အခြေခံဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောဒေတာကွန်ရက်ကဏ္ဍတွင် အီရန်၏အမည်ရဒေတာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီအတွက်တစ်ဦးတည်းသာအများပြည်သူကွန်ရက်ကရှိပါသည်။ အစိုးရမဟုတ်သောကဏ္ဍတွင်တစ်ဦး shared ဒေတာကွန်ရက်နှင့်အတူကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိသည်။
အုပ်စု ၄ - လက်အောက်ခံဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီအမည်ရှိသော လုပ်ငန်းခွဲဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်သည် အခြားအခြေခံဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုကွန်ယက်အားလုံး သည် အပြည့်အဝ အစိုးရပိုင်များဖြစ်ကြပြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်ရန်အတွက် ပစ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
TCI ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်အခြေခံအဆောက်အဦး ထိုမှ ခွဲထွက်သွားဖို့ရန်ရှိသည်။၎င်းအပြင် မိမိ၏လှုပ်ရှားမှုများကို ICT အမည်ဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်ပေသည်။ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ပေါင်း၃၃ခုသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်ရမည်ဟု ကြေငြာထားသည်။ ထိုအကြောင်းအရာသည် MTN Irancell ဒုတိယပုဂ္ဂလိက ပိုင်ကုပ္ပဏီ ပေါ်လာမှုနှင့် တပြိုင်နက်ဖြစ်သွားမှုရှိသည်။ ထိုသို့ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ကုပ္ပဏီပေါ်လာခြင်းနှင့် ထပ်မံ၍ အော်ပရေတာအသစ်တခုပေါ်လာခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သိသိသာသာ ပြိုင်ဆိုင်မှု အနေအထားတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ထိုမှတဆင့် အသုံးပြုသူများအတွက် သက်သာမှုများရှိခဲ့သလို ဝန်ဆောင်မှုအားလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။
၂၀၀၉ – IPO(ပထမအဆင့် အများရှေ့ အော်ဖါယူခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် TCI ၏ရှယ်ယာ ၅၁% ကို Mobin Trust Consortium သို့ $ ၇.၈ဘီလီယံဖြင့် ရောင်းချခဲ့သည် Mobin Trust Consortium အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ Corps နှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သည်ဟု အချို့မီဒီယာများက အခိုင်အမာပြောခဲ့ကြသည်။.
အခြားသော ICP/ISP IPOs[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၁၁ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် ICP / ISP Iran Afranet (တီဟီရန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် အိုင်ကွန်: AFRZ1) သည် အများပြည်သူသုံးဖြစ်ခဲ့သည် ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၏စ၍ တီဟီရန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းတွင် အခြား မည်သည့် ICP / ISP ကုပ္ပဏီမျှမရှိချေ။
"Entrepreneurship Ecosystem in Iran" (PDF) (Winter 2014). Iran Entrepreneurship Association.
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named digiato
↑ Iran Internet Access Reaches over 55% of Homes - TechRasa
Error in webarchive template: Check |url= value. Empty. - Australian Trade
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အီရန်နိုင်ငံရှိ_ဆက်သွယ်ရေး&oldid=473369" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၁၇:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။